Ukufumana iiNxalenye zoMatshini wokuSula iAntique - Okunye
Ukufumana iiNxalenye zoMatshini wokuSula iAntique
Oomatshini bokuthunga i-Antique bayathandwa kakhulu ziimpahla eziziqoqo, ezikhokelela kwimfuno enkulu yamalungu omatshini okuthunga i-antique. Ngethamsanqa kubaqokeleli, la malungu kulula ukuwafumana.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba inja ikhule ngokupheleleyo
Ukuqokelela oomatshini bokuthunga iAntique kunye neeVintage
Ukuqokelela oomatshini bokuthunga be-antitique kunye nevintage lishishini elikhulu kunye nokuzonwabisa okuthandwayo kumazwe amaninzi. Oomatshini bokuthunga izinto zakudala banesibheno esomeleleyo kubaqokeleli kuba bayamangalisa kwaye banendima ebalulekileyo ekuqhubeleni phambili uluntu lwethu.
Oomatshini bokuthunga abancinci
Ukuchonga i-Antique Glassware
Imifanekiso yezixhobo zeAntique
Umatshini wokuthunga wawubaluleke kakhulu kwitekhnoloji kuba yenza ukuveliswa okuninzi kwempahla kunye namalaphu. Nokuba umntu uqokelela oomatshini bokuthunga ekhaya okanye oomatshini bokuthunga abasebenza kwimizi-mveliso, uninzi lwabaqokeleli banomdla nje ngezi zinto zodidi ezintle.
Abaqokeleli abanzulu bangazibandakanya noMbutho woMqokeleli woMatshini wokuThwala wamanye amazwe. Le kilabhu yehlabathi yabathandi bemishini yokuthunga yamandulo yasekwa ngo-1985 liqela elincinci labaqokeleli boomatshini bokuthunga abangamaNgesi e-UK. Umbutho ukhule waquka amalungu kwilizwekazi ngalinye elinamasebe ongezelelweyo eMelika nase Australia.
Indlela yokuFumana iAntique yokuSula iinxalenye zomatshini
Ukufumana iinxalenye zomatshini wakho wokuthunga i-antique kulula ukuba unolwazi olwaneleyo malunga nomatshini. Oomatshini bokuthunga be-antique babenikwe amandla ngabantu ngesandla se-crank okanye i-foot pedal, ebizwa ngokuba yi-treadle. Izinto oya kuzifuna ukuze ufumane icandelo elifanelekileyo zibandakanya:
Inombolo yenxalenye, inkcazo okanye umsebenzi
Emva kokuba unolwazi oluchanekileyo, ukukhangela kwi-intanethi kuya kuba yindlela esheshayo neyona ndlela elula yokufumana inxalenye yomatshini wokuthunga okanye iindawo ozifunayo. Ezi webhusayithi yindawo elungileyo ukuqala:
nikela ifenitshala nj pick up simahla
Umatshini wokuthunga iA1
Umatshini wokuthunga imvumi
Amacandelo oomatshini bokuthunga
Iindawo eziqhelekileyo zokuthunga i-antique eziqhelekileyo ezifuna ukutshintshwa zibandakanya:
Iibhanti (iibhanti zokunyathela isikhumba)
I-Bobbins, iimeko ze-bobbin, i-bobbin winders
Ukulungiswa koomatshini bokuthunga abaphambili beAntique
Abanye oomatshini bokuthunga be-antique banqweneleka ngakumbi kwaye baxabiseke ngakumbi kunabanye. Oomatshini bokuthunga abenziwe ngaphambi kowe-1870 babedla ngokuba nexabiso eliphezulu Ezi ndidi zilandelayo zoomatshini bokuthunga abaphambili zezona zona enexabiso eliphambili kubaqokeleli nakubathengisi beantique:
Oomatshini bokuthunga abenziwe ngesandla
Ukubamba koomatshini bokuthunga
Oomatshini bokuthunga abatsha baseNgilani
Paw oomatshini bokuthunga isitayile sonyawo
Imodeli yokuhlabelela yoomatshini yoku-1
Imodeli yomculi 2 yokuthunga oomatshini
Oomatshini bokuthunga oomculi
Ileta yeemvumi Oomatshini bokuthunga
Imvumi Featherweight koomatshini bokuthunga abangama-221 kunye nama-222
Ukuba unomdla ekuqokeleleni oomatshini bokuthunga be-antique ngenjongo yokulungisa nokuzama ukubathengisa, ezi ziindidi zoomatshini bokuthunga ekufuneka ubakhangele.
Ngokwe-Antiqbuyer.com, enye indlela elula yokuxelela ixabiso lomatshini wokuthunga we-antique yinombolo ye-serial. Umatshini wokuthunga omdala kuwo nawuphi na umenzi onenombolo ye-5000 okanye engaphantsi uya kuba nexabiso ngakumbi, ngakumbi abo bavelisi bangaziwayo. Oomatshini bokuthunga abaneenombolo ezingaphezulu kwama-50 000 bangathathelwa ingqalelo kamva kwiimodeli zazifana. Nokuba umatshini ubuyele kwi-1890, inombolo ephezulu ye-serial iyenza ibaluleke kancinci kubaqokeleli abanzulu.
Ngoyena mvelisi mkhulu kwaye uphumelele kakhulu koomatshini bokuthunga be-antique yayiyinkampani yeemvumi. Ngelixa uninzi lwenkulungwane yokuqala yama-20, oomatshini bokuthunga iimvumi beVine babalulekile njengezinto zokuhombisa kuphela, iimodeli zokuqala zomculi ezichazwe apha ngasentla zisabambe ixabiso njengezinto zokuqokelela izinto. Into elungileyo malunga nokubuyisela umatshini wokuthunga we-Singer kukuba inkampani isekhona kwaye ezinye izinto ezitshintshayo ngoomatshini bokuthunga ii-antique zisasetyenziswa yinkampani.
Ungayibhala njani inkqubo yomngcwabo
Imodeli yokuCula yama-221 kunye nama-222 oomatshini bokuthunga ii-Featherweight zithathwa njengoomatshini abafanelekileyo bokuthunga iidiliya ngabaqokeleli be-antique, i-quilters kunye ne-seamstresses. Oomatshini bokuthunga iidiliya yinto eshushu kubo bobabini abathengi kunye nabathengisi kwaye bahlaziyiwe, oomatshini abasebenza kwimeko elungileyo bathengisa ngeedola ezingama-500 ukuya kuma-650 eedola kwi-Intanethi.
Enoba ufuna umatshini wokuthunga we-antique wento yokuhombisa ekhayeni lakho okanye ufuna ukusebenzisa enye yeeprojekthi zokuthunga ezijikeleze indlu, aba matshini bahle benza iziqokelelo ezintle.
Ukufa Kwinkcubeko Ngaphandle Kwehlabathi Isihlangu Brands Imithi Iingcaciso Zewayini Malunga Izacholo
Ukukhusela Your Credit
Ikampu Ukutya Iiindlela
Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nophawu Lomntu
Usuku lokubhiyozela ootata ezulwini
ukucoca njani amadreyini ngesoda yokubhaka kunye neviniga
ukuba uthini kumhlobo osentlungwini
ukuba ndiyarhoxa emsebenzini ndingayiqokelela intswela ngqesho
inobunzima obungakanani imoto ephakathi
indlela yokusonga i-hankie yesuti